प्रधानमन्त्रीको तुच्छ कटाक्ष : प्रचण्ड-माधवलाई ‘भैँसी खाने किर्ना’सँग तुलना ! (भिडियाे) « Drishti News – Nepalese News Portal
प्रधानमन्त्रीको तुच्छ कटाक्ष : प्रचण्ड-माधवलाई ‘भैँसी खाने किर्ना’सँग तुलना ! (भिडियाे)
३० चैत्र २०७७, सोमबार ७ : ३१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निक्कै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भए । राजधानीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न पुगेका ओलीले सरकारविरुद्ध लागेलाई निर्मम प्रहार गरे ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको भन्दै माओवादीको झाँको झार्दै भने– ‘लैजौ तिमेर्को समर्थन, मलाई चाहिया छैन ।’ तर, केही प्रस्तुती यस्ता थिए, हाँसौ भन्दा हाँस्न पनि नसकिने, नसनुनौ भन्दा सुनौ झै लाग्ने !
ओलीले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालाई ‘भैँसी खाने किर्ना’ नै भने । नयाँ सरकार गठनका लागि मोर्चाबन्दीमा रहेकालाई ‘छिर्केमिर्के भाले’ भन्दै खिल्ली उडाए ।
एउटै जातका छिर्केमिर्के भाले !
ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपा दुई धारामा विभाजित भएपछि प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई कारवाही गर्यो । त्यो कारवाहीलाई ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने प्रयासको रुपमा ब्याख्या गरे । अहिले आफूलाई सत्ताच्यूत गर्ने तयारीलाई ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने योजना भने । सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेकालाई ‘एकै जातको छिर्केमिर्के भाले’ भन्दै खिल्ली उडाए ।
ओलीको भाषण जस्ताकौ त्यस्तै–
नेकपा एमाले बाहेक सप्पैसँग मिल्ने रे ! वामपन्थीसँग नमिल्ने, देश बनाउनेसँग नमिल्ने अनि उस्तै उस्ताहरू मिल्ने रे ! कुखुराको कोइ भाले रातो हुन्छ, कोइ भाले कालो हुन्छ, कोइ भाले छिर्केमिर्के हुन्छ । तर, भाले त कुखुराकै हो नि । यी सबै जो–जो मिल्ने भनेर हिनिराखेका छन्, विभिन्न रंगका छिर्केमिर्के मात्र हुन्, तर एउटै जाताका भाले । यीनको उद्देश्य एउटै छ– कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने ।
प्रचण्ड–माधव भैँसी खाने किर्ना !
एक घण्टा लामो भाषणमा ओलीले सबै जसो समय प्रचण्ड–माधवलाई गाली गर्न खर्चे । गाली गर्दागर्दै ‘चेसको प्यादा’, ‘लाम्खुट्टे’ र ‘उपियाँ’ भन्न समेत पछि परेनन् । त्यति मात्र होइन, भैँसी खाने किर्नासँग समेत तुलना गरे । भाषणको अंश यस्तो छ–
मान्छेले पत्याउँदैन तर हो । उस्तै पर्यो भने चेसमा प्यादाले मन्त्री खान्छ । लाम्खुट्टेले हात्ती खान्छ । उपियाँले मान्छे खान्छ । यिनिहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलन खान्छु भनेको त्यै हो । उपियाँले हात्ती खायो । किर्नाले भैँसी खादैन ? खान्छ नि ! हाे, यिनिहरूले हामीलाई कारवाही गरेको त्यस्तै हो । किर्नाले भैँसी खायो । खैर किर्ना किर्नाकै ठाउँमा हुन्छ, भैँसी भैँसीकै ठाउँमा हुन्छ । सन्तोष गर्न पाइन्छ । किर्नाले भैँसी खायो । भैँसी खायो ! खायो ! खायो … किर्ना पुटुक्क भयो, फुतुक्क झर्यो । अहिले किर्ना फत्रक फत्रक…
राजनीतिक नेतृत्वमा बेला–बेला तुच्छ गालीगलौज गर्न पछि पर्दैनन् । त्यसमा पनि ओली अगाडि छन् । हुन त होली मात्र होइन, अन्य नेता पनि त्यसरी नै प्रस्तुत हुन्छन् । ओलीले प्रचण्ड–माधलाई ‘भैँसी खाने किर्ना’ भन्दै गर्दा उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीलाई ‘पागल प्रधानमन्त्री’ भनेका थिए ।